तपाइँको नयाँ वेब साइट को योजना कसरी बनाउने Martech Zone
हामी सबै त्यहाँ भएका छौं ... तपाईंको साइटलाई पुनःताजा आवश्यक छ। या त तपाईंको व्यवसाय पुनःबहाली भएको छ, साइट बासी र पुरानो भएको छ, वा यो केवल आगन्तुकहरूलाई रूपान्तरण गरिरहेको छैन जसरी तपाईंलाई यो आवश्यक छ। हाम्रा ग्राहकहरू हामीकहाँ रूपान्तरणहरू बढाउन आउँदछन् र हामी अक्सर एक कदम पछि फिर्ता लिनुपर्नेछ र ब्रान्डि fromबाट सामग्रीमा उनीहरूको सम्पूर्ण वेब प्रिसेन्सलाई पुन: विकास गर्नुपर्नेछ। हामी यो कसरी गर्छौं?
एक वेब साइट key कुञ्जी रणनीतिहरु मा विभाजित छ, जो विस्तृत हुनु पर्छ ताकि तपाईलाई थाहा छ कि तपाई कहाँबाट आउनु भएको हो र तपाईको लक्ष्य के हो:
प्लेटफर्म - कुन प्रविधिहरू प्रयोग, होस्टि,, प्लेटफर्महरू, आदि।
पदानुक्रम - तपाईंको साइट कसरी व्यवस्थित गरिएको छ।
सामग्री - कुन जानकारी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ र कसरी।
प्रयोगकर्ता - कसले साइट पहुँच गर्दछ र कसरी।
विशेषताहरु - ग्राहकहरु लाई रूपान्तरण गर्न के के सुविधाहरु चाहिन्छ।
मापन - तपाईं कसरी आफ्नो सफलता वा सुधारको क्षेत्र मापन गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यहाँ अब एक साइटमा विभिन्न आयामहरू छन् र ती कसरी तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूमा एकीकृत छन्। कसरी नयाँ साइट यी रणनीतिहरू पूरा गर्दछ:
ब्रान्ड - रूप, भावना, र colorsहरू, फन्टहरू, डिजाइन, शब्दहरू, आदि। जुन साइट वर्णन गर्दछ।
कार्य गर्न कल - रूपान्तरणका लागि के मार्गहरू छन् र मानिसहरू त्यहाँ कसरी पुग्ने छन्?
ल्यान्डिङ पृष्ठहरू - जहाँ मान्छे रूपान्तरण हुनेछ र रूपान्तरण को मूल्य के हो? के त्यहाँ एक CRM वा मार्केटिंग स्वचालन एकीकरण आवश्यक छ?
सामग्री - ब्रोशर जानकारी, कम्पनी विवरण, कर्मचारी, फोटो, प्रस्तुतिकरण, इन्फोग्राफिक्स, ह्वाइटपेपर, प्रेस विज्ञप्ति, डेमो अनुरोध, प्रयोगकर्ता परिदृश्य, डाउनलोड, वेबिनर, भिडियो, आदि।
इमेल - व्यक्तिले कहाँ सदस्यता लिन्छन्, तपाईं कसरी सदस्यताहरू र स्प्याम नियमहरू प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ।
खोज - प्लेटफर्म, कुञ्जीशब्द अनुसन्धान, पृष्ठ निर्माण, सामग्री सिफारिशहरू, आदि।
सामाजिक - स्निपेट्स, साझेदारी बटन र सामाजिक उपस्थितिमा लिंक साइटभरि एकीकृत हुनुपर्दछ र प्रचार गर्नु पर्छ।
NOTE: सुधारिएको सहयोगको लागि, हाम्रो ग्राहकको प्रयोग गर्नुहोस् mindmapping उपकरण नक्शा र पदानुक्रम र संशोधित गर्न को लागी सरलता बनाए र साइट को प्रवेश को २-ks क्लिक भित्र सबै गतिविधि संगठित गर्न।
यी रणनीतिहरूको प्रत्येक भित्र, के विवरणहरू छन्
साइटले हाल के गर्छ कि तपाईंलाई यो आवश्यक छ गर्न जारी राख्नुहोस्?
वर्तमान साइटले के गर्दैन नयाँ साइट गर्नु पर्छ?
वर्तमान साइटले के गर्दैन भनेर त्यो हुँदैन गर्न राम्रो लाग्यो नयाँ साइटमा?
ती रणनीतिहरू प्रत्येकको साथ, विकास गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता कथाहरू प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि र कसरी उनीहरू साइटसँग कुराकानी गर्छन्। गर्न को लागी र गर्न को लागी मा ब्रेक। एक प्रयोगकर्ता कहानी कसरी उपयोगकर्ता अन्तर्क्रिया गर्दछ र स्वीकृति परीक्षणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेको एक समृद्ध वर्णन हो। यहाँ एक उदाहरण छ:
प्रयोगकर्ताले प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डको साथ लगइन गर्न, साइटको लागि दर्ता गर्न, र यदि अज्ञात छ भने तिनीहरूको पासवर्ड पुनःप्राप्त गर्न सक्षम छ। दर्ताका लागि प्रयोगकर्ता नाम, पूरा नाम, ईमेल ठेगाना र बलियो पासवर्ड आवश्यक छ (सानो केस, ठूलो केस, संख्या र प्रतीकहरूको संयोजन)। वैध ईमेल ठेगाना प्रयोग भएको निश्चित गर्न ईमेल पुष्टिकरण समावेश गर्नुपर्नेछ। समर्थन बिना कुनै पनि समयमा प्रयोगकर्ताले तिनीहरूको पासवर्ड परिमार्जन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
अब हामी नाइट ग्रिट्टीमा प्रवेश गरिरहेका छौं ... तपाईंले आफ्नो साइटको विवरणहरू पाउनुभयो, कसरी प्रयोगकर्ताहरू यससँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्, साथ साथै नयाँ साइटको आवश्यकताहरू र चाहनुहुन्छ। Iterative सुधार कुञ्जी हो - सुविधाहरू र प्रयोगकर्ता कथाहरूको प्राथमिकता दिनुहोस् ताकि तपाईंलाई थाहा पाउनु पर्छ के राम्रो छ को माध्यम बाट पहिले के गरिनु पर्छ। लक्ष्यहरू र स्रोतहरूको बारेमा सोच्न सुरू गर्नुहोस् तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर अपेक्षाहरू सेट गर्न र जब तपाईंलाई यसको आवश्यकता हुन्छ।
सूची पृष्ठहरूको लागि साइट। अक्सर, हामी यसलाई सजिलो बनाउन एक खुरचुर प्रयोग गर्दछौं।
प्रत्येक पृष्ठको साथ, कस्तो प्रकारको पृष्ठ वर्णन गर्नुहोस् टेम्पलेट पृष्ठ राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुनेछ।
विकास वायरफ्रेमहरू पृष्ठ लेआउट र नेभिगेसन निर्धारण गर्न।
यदि पृष्ठ गणना घटाइनेछ (प्राय: सिफारिस गरिएको), तपाईं कहाँ हुनुहुनेछ पुनर्निर्देशित अवस्थित पृष्ठहरू ताकि तपाईं प्रयोगकर्ताहरू र खोजमा अवरोध नपरोस्? सबै हालका पृष्ठहरू र नयाँ स्थानहरूको नक्सा।
सामग्री विकास गर्नुहोस् माइग्रेशन नयाँ CMS मार्फत सबै अवस्थित पृष्ठहरूलाई नयाँ पृष्ठ सजावटहरूमा ल्याउने योजना। यो धेरै प्राथमिक हुन सक्छ ... प्रतिलिपि र टाँस्नको लागि ईन्टर्नको आवश्यकता पर्दछ। वा यो एक जटिल डाटाबेस रूपान्तरण हुन सक्छ जुन जानकारी आयात गर्नका लागि लेखिएको थियो।
को एक म्याट्रिक्स बनाउनुहोस् प्रयोगकर्ता, विभागहरू, पृष्ठ र प्रक्रिया द्वारा पहुँच र अनुमतिहरू। आवश्यकतामा अलग गर्नुहोस् र गर्नमा राम्रो छ।
तपाईंको योजना बनाउनुहोस्
प्रत्येक कार्य आइटमसँग एक (जिम्मेवार), के (विस्तृत रूपमा गरिएको छ), कसरी (वैकल्पिक), कहिले (अनुमानित समाप्ति मिति), निर्भरता (यदि अर्को कार्य पहिले गर्नुपर्दछ) र प्राथमिकता हुनुपर्दछ। , चाहन्छन्)।
प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्नुहोस् र कार्य र टाइमलाइनमा उनीहरूको सम्झौता प्राप्त गर्नुहोस्।
माध्यमिक संसाधन, workaround, र reprioritization साथ लचिलो हुनुहोस्।
केन्द्रीय परियोजना प्रबन्धक छ जो दैनिक आधारमा ट्र्याक, अपडेट र रिपोर्ट गर्दछ।
ग्राहक समीक्षा र तपाईंको समाप्ति मितिहरू बीच संशोधन र समायोजन गर्न प्रशस्त समयको साथ बफरहरू निर्माण गर्नुहोस्। यदि नयाँ सुविधाहरू (स्कोप रमाईलो) पेश गरिएमा, ग्राहकलाई निश्चित हुन्छ कि कसरी टाइमलाइनहरू प्रभाव पार्न सकिन्छ र कुन थप लागतहरू लाग्न सक्छ।
एक स्टेजिंग वातावरण मा ग्राहक संग प्रदर्शन र माध्यम हिँड्नुहोस् प्रयोगकर्ता कथाहरू स्वीकृति को लागी।
एकीकृत गर्नुहोस् विश्लेषण घटना ट्र्याकिंग, अभियान व्यवस्थापन र रूपान्तरण मापन को लागी साइट भर।
एक पटक स्वीकृत भएपछि, साइट लाइभ राख्नुहोस्, पुरानो ट्राफिकलाई नयाँमा पुनर्निर्देशित गर्नुहोस्। वेबमास्टरहरूको साथ साइट दर्ता गर्नुहोस्।
र्याकि aको स्न्यापशट लिनुहोस् र विश्लेषण। साइट संशोधित भएको दिन एनालिटिक्समा नोट थप्नुहोस्।
तपाईंको योजना कार्यान्वयन गर्नुहोस्! एक पटक साइट तयार छ
जगेडा हालको साइट, डाटाबेस र कुनै सम्पत्ति आवश्यक छ।
A निर्धारण गर्नुहोस् contingency योजना जब चीजहरू गलत हुन्छन् (र ती गर्दछन्)।
तालिका साइटको लागि 'लाइभ जानुहोस्' मिति / समय जहाँ प्रयोगकर्ताहरू कम प्रभावित हुन्छन्।
प्रमुख कर्मचारीहरू छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् सूचित यदि त्यहाँ एक विन्डो छ जहाँ साइट अनुपलब्ध हुन सक्छ - ग्राहकहरू सहित।
एक छ सञ्चार योजना फोनमा च्याटबाट सबैजनाले पहुँचयोग्य छन् भनेर निश्चित गर्न ठाउँमा।
नयाँ साइट राख्नुहोस् बाँच्न.
परीक्षण प्रयोगकर्ता कथाहरू फेरि.
साइट सुरूवात अन्त छैन। अब तपाईंले स्तर, वेबमास्टरहरू र अनुगमन गर्नै पर्छ विश्लेषण यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईंले योजना बनाउनु भएको अनुसार साइटले प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रत्येक २ हप्तामा to देखि weeks हप्ता प्रगतिको साथ रिपोर्ट गर्नुहोस्। योजनाहरू बनाउनुहोस् र तदनुसार परियोजनाहरू अपडेट गर्नुहोस्। भाग्यले साथ दिओस्!
टैग: जगेडासञ्चार योजनामाइग्रेशननयाँ साइट योजनायोजनायोजनासाइट जगेडासाइट माइग्रेसनप्रयोगकर्ता कथाहरूवेब डिजाइनवेब डिजाइन योजनाwireframe
मार्स 12, 2014 मा 7: 21 एएम
एक साइट को योजना बनाएर ठूलो ब्रेकडाउन! यी क्षेत्रहरू प्रत्येक निश्चित रूपमा अतिरिक्त छलफलको लागि अनुमति दिन्छ।
यो एक श्रृंखला को लागी महान हुनेछ… .सुरक्षित साथ!
मार्क्स 12, 2014 मा 2: 48 PM
त्यसो गरौं! सायद एक इन्फोग्राफिक र ह्वाइटपेपर को-लेखक?